छोरधारा लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना पौदीअमराईको अध्यक्षमा थापा – Gulmiews
छोरधारा लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजना पौदीअमराईको अध्यक्षमा थापा
२९ माघ २०७३, शनिबार २१:३५ सन्जु काउछा मगर
गुल्मी, २८ माघ । गुल्मीको पौदीअमराइर्मा छोरधारा लिफ्टिङ्ग खानेपानी आयोजनाका उपभोक्क्ताहरुको भेला सम्पन्न भएको छ । भेलामा बोल्दै जिल्ला विकास समिति गुल्मीका स्वास्थ्य प्रर्वतक कृष्ण बहादुर बस्नेतले अव तत्काल योजनाको सर्भे र इस्टिमेटको प्रक्रिया अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
शुक्रबार सम्पन्न भेलाले जिल्ला विकास समिति गुल्मी र पश्चिम नेपाल ग्रामिण खानेपानी तथा सरसफाई परियोजना दोश्रो चरण अन्तर्गत गाविसको वडा नं. ३,४ र ५ वडाहरुमा छोरधारा लिफ्टिङ्ग खानेपानी मार्फत खानेपानी परियोजना सञ्चालन गर्नको लागि हरि वहादुर थापाको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय उपभोक्ता समितीको गठन गरेको छ । समितिको उपाध्यक्षमा दान ब. केसी, सचिवमा देवेन्द्र गुरुङ्ग, सह सचिवमा ठग ब. पुन र कोषाध्यक्षमा पुर्णकला गौतम रहनुभएको छ ।
यस्तै भेलाले डम्बर ब. थापाको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सल्लाहकार समितिको समेत गठन गरेको छ । लामो समयदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेका उपभोक्क्ताहरु अव भने खानेपानी आउने आशाले थप उत्साहित भएका छन् ।